मारिया डाउडेस: पुस्तकहरू | वर्तमान साहित्य
मारिया डाउडेस: पुस्तकहरू
मारिया डाउडेस द्वारा वाक्यांश।
मारिया ड्युडेस साहित्यिक क्षेत्रमा प्रख्यात स्पेनिश लेखक हुन्, जुन उनको पहिलो पुस्तक ऐतिहासिक उपन्यासको लागि धन्यवाद छ। Seams बीचको समय (२००)) the अन्तिम दशकको सब भन्दा बेच्ने कामहरू मध्ये — यस कथाको साथ, लेखकले पुरस्कार जित्यो: साहित्य श्रेणीमा सियुदाद डे कार्टाजेना डे नोभेला हिस्ट्रीिका (२०१०) र कुल्टुरा (२०११)।
यो २०२१, डाउडास आफ्नो नयाँ किस्तमा फिर्ता आएको छ: सिरा, उनको प्रसिद्ध पहिलो फिल्मको उत्तरवर्ती। यसले पोशाक निर्माता सिरा क्विरोगाको जीवनलाई निरन्तरता दिन्छ, अब अधिक वयस्क र अन्य परिप्रेक्ष्यमा। यसको सुरूवातको केही महिनाको साथ, यस उपन्यासले सूचीमा पहिलो स्थान ओगटेको छ अत्यधिक बिक्री भएको स्पेन र संसारमा; निस्सन्देह, स्पेनी उपन्यासकारका लागि अर्को नयाँ सफलता।
1.1 अध्ययन र कार्य अनुभव
1.2 साहित्यिक दौड
1.3 मारिया डाउडास द्वारा पुस्तकहरू
2 मारिया दुडियासका उपन्यासहरूको सारांश
2.1 Seams बीचको समय (२००))
2.2 मिशन ओब्लिभियन (२०१२)
2.3 तापमान (२०१ 2015)
2.4 क्याप्टेनका छोरीहरू (२०१ 2018)
मारिया ड्यूडेस विनुसे १ 1964 .XNUMX मा स्पेनको पोर्टोलानो शहरमा संसारमा आईन्। आठ भाइबहिनी मध्ये, उनी जेठा थिए। उनको आमा: Ana Mar Vina Vinuesa acteacher—; र उनको बुबा: अर्थशास्त्री पाब्लो डाउडेस सम्पर। लेखक आफ्नो परिवारसँग सामान्य र खुसीको बाल्यावस्था गरेकोमा स्वीकार्छ, जसमा उनले धेरै पढेका थिए र जसमा, साथै, सबै भन्दा जेठो हुनुको लागि धन्यवाद, उनी एक जन्मजात नेता भइन्।
उनले आफ्नो व्यावसायिक अध्ययन म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीमा पूरा गरे अंग्रेजी फिलोलजीमा स्नातक गरे; क्यारियर जहाँबाट उनले पछि डक्टरेट गरे। सिकाइएको कक्षा दुई दशक भन्दा बढीको लागि मर्सिया विश्वविद्यालय को पत्र संकाय मा र धेरै अमेरिकी शैक्षिक केन्द्रहरूमा; काम जुन उनले पहिलो उपन्यासको प्रकाशन पछि छोडे।
र 2009, लेखक संग साहित्यिक क्षेत्र मा शुरू भयो Seams बीचको समय, एक उपन्यास जुन विश्वभरि २ 25 मिलियन भन्दा बढी पाठकहरूलाई चकित पार्छ। यो कथा स्टारडम को लागी स्पेनिश शुरू भयो; सफलता द्वारा तुरुन्तै पूरक च्यानल द्वारा सिरियल ढाँचामा यो रूपान्तरण एन्टेना।. दुबै पुस्तक र टेलिभिजन कार्यक्रम धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको थियो।
आफ्नो पहिलो काम संग आफ्नो मार्ग बनाए पछि, स्पेनिश हरेक तीन बर्ष मा एक नया उपन्यास प्रकाशित गरेको छ, जसको साथ उनले आफ्नो क्यारियर सुदृढीकरण गर्न सकेका छन्। यी हाइलाइटहरू मध्ये: तापमान (2015)जुन आफ्नो प्रक्षेपणको बर्षमा बिक्रीमा एक प्रमुख थियो। थप रूपमा, यसलाई एक टेलिभिजन श्रृंखलामा अनुकूलित गरिएको थियो बुमेरांग टिभी र यो २०२१ मा स्ट्रिमिंग प्लेटफर्म अमेजन प्राइम भिडियो मार्फत प्रीमियर भयो।
मारिया डाउडास द्वारा पुस्तकहरू
Seams बीचको समय (2009)
मिसन बिर्सनुहोस् (2012)
क्याप्टेनका छोरीहरू (2018)
लेखक मैनुएल ब्यालेस्टेरोज विवाह भएको छ - ल्याटिन—को चेड्रल; तपाईको विवाहको फल तिनीहरूका दुई बच्चाहरू छन्: जैमे र बरबरा। केही वर्ष पहिले - उनको श्रीमान्को कामको नतीजाका रूपमा - तिनीहरू स्पेनी शहर कार्टाजेनामा बसाई सरे, जहाँ परिवार हाल बसोबास गर्दछ।
मारिया दुडियासका उपन्यासहरूको सारांश
सिरा एक युवा पोशाक निर्माता हुन्, जसलाई, नयाँ प्रेमले चकित, भाग्छ म्याड्रिड बाट तिर को असाधारण शहर Tangier. तरजादू लामो समय सम्म रहँदैन आशा गरेको जस्तो केही थिएन। यस कारणले गर्दा, विदेशी debtsणले पूर्ण भई, उसले मोरक्कन प्रोटेक्टरेटको राजधानी टिटुआन जाने निर्णय गर्दछ। गिमिक्स र छायादार जडानको साथ, उसले एक विशिष्ट एटेलर खोल्यो; त्यहाँ ऊ महत्वपूर्ण र रहस्यमय महिलाहरु सम्मिलित हुनेछ।
सबै समयमा हुन्छ युरोपमा धेरै सशस्त्र संघर्षको समय, त्यसैले Sira व्यक्तित्वहरू भेट्नुहोस् इतिहास मा सन्दर्भ। तीमध्ये फ्रान्कोका मन्त्री जुआन लुइस बेगबेडर, परिष्कृत रोसालिंडा फक्स र अ intelligence्ग्रेजी गुप्तचर निर्देशक एलन हिलगर्थ थिए। ती सबै तिनीहरूले यस जवान पोशाक निर्मातालाई अँध्यारो मार्गमा डो lead्याउनेछन् र खतरनाक, एक मुख को रूप मा रहेको आफ्नो सिलाई कार्यशाला।
प्रोफेसर ब्लांका पेरा - उनको पतिको परित्याग पछि- उसको जीवनको सबैभन्दा नराम्रो क्षणहरू मध्येको पार गर्दै। उसको कमजोर अवस्थाबाट उम्कने एक मात्र व्यक्तिले अमेरिकी भूमिमा शैक्षिक कार्य गर्ने अवसरलाई स्वीकार गर्नेछ। त्यो कसरी छ सान्ता सेसिलियाको सानो विश्वविद्यालय आइपुग्छ, क्यालिफोर्नियामा। एक शांतिपूर्ण आभा संग एक नयाँ स्थान र उनी सोच्न भन्दा अधिक रमाईलो।
ब्लान्काले उनको काम थाल्नेछ: उनको सहकर्मी र सँगी देशवासी एन्ड्रेस फन्टानाको विरासतको दस्तावेज, जो जीवनमा हिस्पैनिकवादी थिए र गृहयुद्ध पछि निर्वासित भएका थिए। अनुसन्धान मा सहयोगी हुनेछ फन्टानाका एक पूर्व चेला, आकर्षक डानियल कार्टर। परियोजना बढ्दै जाँदा, धेरै मिश्रित भावनाहरूमा संलग्न अज्ञातहरू बढ्नेछन्।
यो युद्धको एक भूतकालको बीचमा ट्रान्जिट, निर्वासनमा र अविस्मरणीय पात्रहरू, प्रकाश आश्चर्यजनक उत्तरहरु लाई ल्याउँछ यसले वर्तमानलाई असर गर्छ।
१ th औं शताब्दीको उत्तरार्धमा, माइनर माउरो ल्यारियाले आफ्नो सबै सम्पत्ती गुमायोजुन मेक्सिकोमा उनले निकै मेहनतका साथ खोपेको थियो। Debtणले भरिएको छ र आफ्ना बच्चाहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न उठ्नको लागि हेर्दै, उनीसँग सम्पन्न हवानाको यात्रामा थोरै जोखिम छ। त्यहाँ भाग्यको अचानक स्ट्रोकले उसलाई आफ्नो देश फर्किनेछ, तर यसपटक जेरेज शहरमा बसोबास गर्ने छ।
विधुर मउरोको नयाँ रहनु त्यति सजिलो छैन जति उसले सोच्यो, उसले केही बाधा भेट्टाउने छ जुन उसले विश्वास गर्‍यो नयाँ विजयको सुरुवात थियो। उसले सोलेदाद मोन्टल्भोलाई भेट्ने छ, एक चाखलाग्दो र विवाहित महिला, जसले तपाईंको सबै योजनाहरू जटिल बनाउनेछ। त्यहा बाट, दाखबारी, विजय, घाटा, जोसका बीच परिवर्तनहरूको एक श्रृंखला हुनेछ, परिवार कठिनाइ र साहस को एक धेरै।
१ 1936 .XNUMX मा, Emilio Arenas Spanishए स्पेनिश आप्रवासी न्यु योर्कमा उत्तम जीवनको खोजीमा छ उनको परिवार को लागी, जो अझै स्पेन मा संकटग्रस्त छ। चाँडै, एउटा सानो रेस्टुरेन्ट "एल क्यापिटन" सुरू गर्नुहोस्, जसले उनलाई आफ्नी श्रीमती रेमेडीयो र छोरीहरू ल्याउन अनुमति दिन्छ: मोना, भिक्टोरिया र लुज। तिनीहरू आफ्नी आमालाई लडाई दिन्छन् किनभने तिनीहरू महादेश परिवर्तन गर्न अनिच्छुक छन्; तर अन्ततः तिनीहरू सुरु हुन्छन्।
अप्रत्याशित दुर्भाग्य पछि, नयाँ आगमनको जीवन विश्वास बाहिर परिवर्तन हुनेछ। Emilio का असभ्य छोरीहरू तिनीहरूले एल् क्यापिटानको ख्याल राख्नु पर्छ, जबकि तिनीहरूले एक रसदार क्षतिपूर्ति को लागि प्रतीक्षा। यी युवतीहरूले परिपक्व हुनुपर्नेछ र पारिवारिक विरासतको लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ, द्वन्द्वको आँधीले घेरेको। भाषा र वित्तीय समस्याहरू यसको एक हिस्सा हुनेछन्, तर तिनीहरूको साहस अधिक हुनेछ।
क्याप्टेनका छोरीहरू ...
Ha विगतको विश्व युद्ध दोस्रो, सबै युरोप पुनर्जन्म हुन थाल्छ फेनिक्स चरा जस्तै र, उनको छेउमा, Sira Bonnard, जो नयाँ, अधिक शान्तिमय जीवनको लागि चाहन्छ। तर, केहि सजिलो छैनअचानक, उनको वास्तविकता फेरि बदलिन्छ, राम्रो भविष्यको लागि कडा लड्न बाध्य भई। उनको गति असर हुने छैन, किनकि उनी सँधै महान, साहसी र दृढ महिला थिइन्।
कामका कारणका लागि, सिराले धेरै क्षेत्रहरू यात्रा गर्नुपर्नेछ, जस्तै: प्यालेस्टाइन, इ England्ल्यान्ड र मोरक्को। उनको नयाँ अनुभवले उनको आइकॉनिक चरित्रहरूमा भाग लिनेछ, जसले उसलाई सीधा प्रभाव पार्नेछ। तपाईंको बाटोमा समय को कुलीन भाग को भाग, ईवा पेरेन र बरबरा हटनको रूपमा। सीराको लागि बिभिन्न चरण, अपार प्रतिबद्धताले पूर्ण, जुन उसले आफ्नो सार हराए बिना नै मान्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » मारिया डाउडेस: पुस्तकहरू